မိုး မကြာမီ ရွာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ပြောကြား...! - Thadin
HomeNEWSမိုး မကြာမီ ရွာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ပြောကြား…!
မိုး မကြာမီ ရွာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ပြောကြား…!
April 23, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မိုး မကြာမီ ရွာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ပြောကြား…!
လက်ရှိအခြေအနေအရမုတ်သုံလေဦးဟာအီကွေတာအနီးနဲ့ တောင်ဖက် တွင် ရှိနေ သေးခြင်း နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာရော၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာရော မုန်တိုင်းများ အဖြစ်နည်းနေခြင်းတို့ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများ။
မြစ်ဝကျွန်းေ ပါ် ဒေသများ၊ မြေလတ်ပိုင်းဒေသများ နဲ့ တောင်ပိုင်းဒေ သ တွေမှာ မိုးနည်းပြီး အပူချိန်များမြင့်တက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ပူပြင်းလွန်းတဲ့ နေအရှိန်ကြောင့်လူအများက မိုးကို တောင့်တလျက်ရှိနေ ကြပါတယ်။ လက်ရှိအ ခြေ အ နေများအ ပေါ် အ ခြေ ခံကာ မိုး ရွာဖို့အလားအလာကိုတွက်ဆကြည့်ရာ တွင်
ဧပြီလ(၂၂-၂၈)ရက်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု စတင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၊ မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကာ အ ရှေ့မြောက်ဖက်သို့ဦးတည်ရွေ့လျှားလာရင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကမ်းခြေကို ချဉ်းကပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဧပြီလ(၂၈)ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်မိုးရွာ သွန်းမှုမရှိနိုင်သေးပဲ ရာသီဥတု ကို ဆက်လက် ပူပြင်းခြောက်သွေ့နေ စေ ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလ(၂၉)ရက်မှ မေလ(၅)ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာ ကမ်းကိုမဖြတ်ကျော်မီ အားလျော့ သွားနိုင်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိနိုင်ငံကမ်းခြေအနီးမှ ကမ်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ထိုအချိန် မေလ ဆန်း တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမိုးရရှိနိုင်ပြီး အပူရှိန်မြင့်တက်မှုတွေလည်းလျော့နည်းကျဆင်း သွားဖွယ်ရာရှိပါ ကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။
လကျရှိအခွအေနအေရမုတျသုံလဦေးဟာအီကှတောအနီးနဲ့ တောငျဖကျ တှငျ ရှိနေ သေးခွငျး နဲ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောမှာရော၊ တောငျတရုတျပငျလယျပွငျမှာရော မုနျတိုငျးမြား အဖွဈနညျးနခွေငျးတို့ ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံ အလယျပိုငျးဒသေမြား။
မွဈဝကြှနျးေ ပျါ ဒသေမြား၊ မွလေတျပိုငျးဒသေမြား နဲ့ တောငျပိုငျးဒေ သ တှမှော မိုးနညျးပွီး အပူခြိနျမြားမွငျ့တကျလကျြ ရှိနပေါတယျ။ပူပွငျးလှနျးတဲ့ နအေရှိနျကွောငျ့လူအမြားက မိုးကို တောငျ့တလကျြရှိနေ ကွပါတယျ။ လကျရှိအ ခွေ အ နမြေားအ ပျေါ အ ခွေ ခံကာ မိုး ရှာဖို့အလားအလာကိုတှကျဆကွညျ့ရာ တှငျ
ဧပွီလ(၂၂-၂၈)ရကျအတှငျးဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျး တှငျ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးတဈခု စတငျဖွဈပျေါလာနိုငျပွီး၊ မုနျတိုငျးတဈခုအဖွဈသို့ ရောကျရှိလာနိုငျကာ အ ရှမွေ့ောကျဖကျသို့ဦးတညျရှေ့လြှားလာရငျး ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံကမျးခွကေို ခဉျြးကပျလာနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဧပွီလ(၂၈)ရကျနအေ့ထိ မွနျမာနိုငျငံ တှငျမိုးရှာ သှနျးမှုမရှိနိုငျသေးပဲ ရာသီဥတု ကို ဆကျလကျ ပူပွငျးခွောကျသှနေ့ေ စေ ဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဧပွီလ(၂၉)ရကျမှ မလေ(၅)ရကျနအေ့ထိ ကာလအတှငျးမုနျတိုငျးငယျဟာ ကမျးကိုမဖွတျကြျောမီ အားလြော့ သှားနိုငျကာ ရခိုငျပွညျနယျ နဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေိ့နိုငျငံကမျးခွအေနီးမှ ကမျးကိုဖွတျကြျောဝငျရောကျလာနိုငျပါတယျ။
ထိုအခြိနျ မလေ ဆနျး တှငျ မွနျမာတနိုငျငံလုံးမိုးရရှိနိုငျပွီး အပူရှိနျမွငျ့တကျမှုတှလေညျးလြော့နညျးကဆြငျး သှားဖှယျရာရှိပါ ကွောငျး သုံးသပျရရှိပါတယျ။
မြမြ ဆိုသူ၏ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူးပြီး ​ပြောဆိုသည့်​ လူသတ်​ မုဒိမ်း အ​လောင်း​ဖျောက်​မှု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ပြောပြီ…!
ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှာ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ရှိ မရှိ LIVE လွှင့်ဖြေရှင်း…!
Views Today : 8287
Total views : 2725427